ဟောကျဆနျအဝါးကို ချေါယူရနျ အာဆငျနယျအသငျး သဘောတူညီမှု ရသှားပွီလား? – Myan Ball
အာဆငျနယျအသငျးဟာ လိုငျယှနျအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျကစားသမား ဟောကျဆနျအဝါးကို ချေါယူရနျ ပုဂ်ဂိုလျရေးအရသဘောတူညီမှု ရရှိသှားပွီး ပွငျသဈလီဂူး ၁ ကလပအသငျးနဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးသတျမှတျရနျ ကနျြတော့တယျလို့ သတငျးထှကျပျေါလာပါတယျ။ အသကျ ၂၂ နှဈအရှယျကစားသမားဟာ အာဆငျနယျအသငျးနညျးပွ အာတီတာ ဒီနှရောသီအပွောငျးအရှမှေ့ာ လိုခငျြနတေဲ့ ကှငျးလယျကစားသမား (၂) ယောကျထဲက တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ အာဆငျနယျနညျးပွ အာတီတာဟာ အကျသလကျတီကိုမကျဒရဈကှငျးလယျလူ သောမတျဈပါတေးကိုလညျး ချေါယူရနျ ပဈမှတျထားနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။
လိုငျယှနျအသငျးရဲ့ အားကစားဒါရိုကျတာ ဂြူနငျဟိုက ယခုတဈပတျအစောပိုငျးတုနျးက ဘယျအသငျးရဲ့ ကမျးလှမျးမှုကိုမှ မရသေးဘူးလို့ ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပမေယျ့ မကွာခငျမှ ပွောငျးလဲမှု ဖွဈနိုငျတယျလို့ ပွောထားခဲ့ပါတယျ။ အီတလီသတငျးမြားအရ အာဆငျနယျ နဲ့ လိုငျယှနျအသငျးတို့ ကွား ဆှေးနှေးနဆေဲဖွဈပွီး ပွငျသဈယူ ၂၁ နှဈအောကျ လကျရှေးစငျကစားသမားကလညျး အာဆငျနယျကို ပွောငျးရှခေ့ငျြနတောဖွဈပါတယျ။
ဟောကျဆနျအဝါးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ (၂) ပတျလောကျကတညျးက အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးအရ သဘောတူညီမှု ရခဲ့တယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ အာတီတာဟာ ဒီနှရောသီမှာ အသငျးရဲ့ လူစာရငျးကို အငျအားတောငျ့တငျးအောငျ လုပျထားဆဲဖွဈပွီး အသငျးဆီကို ဂါဘရီရယျလျ၊ ဝီလီယံ နဲ့ ဆာလီဘာ တို့ကို ချေါယူထားပွီး ဖွဈပါတယျ။
ဟောက်ဆန်အ၀ါးကို ခေါ်ယူရန် အာဆင်နယ်အသင်း သဘောတူညီမှု ရသွားပြီလား?
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ လိုင်ယွန်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဟောက်ဆန်အ၀ါးကို ခေါ်ယူရန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသဘောတူညီမှု ရရှိသွားပြီး ပြင်သစ်လီဂူး ၁ ကလပအသင်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးသတ်မှတ်ရန် ကျန်တော့တယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာ အာဆင်နယ်အသင်းနည်းပြ အာတီတာ ဒီနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ လိုချင်နေတဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား (၂) ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်နည်းပြ အာတီတာဟာ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကွင်းလယ်လူ သောမတ်စ်ပါတေးကိုလည်း ခေါ်ယူရန် ပစ်မှတ်ထားနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိုင်ယွန်အသင်းရဲ့ အားကစားဒါရိုက်တာ ဂျူနင်ဟိုက ယခုတစ်ပတ်အစောပိုင်းတုန်းက ဘယ်အသင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှ မရသေးဘူးလို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပေမယ့် မကြာခင်မှ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောထားခဲ့ပါတယ်။ အီတလီသတင်းများအရ အာဆင်နယ် နဲ့ လိုင်ယွန်အသင်းတို့ ကြား ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်ယူ ၂၁ နှစ်အောက် လက်ရွေးစင်ကစားသမားကလည်း အာဆင်နယ်ကို ပြောင်းရွှေ့ချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟောက်ဆန်အ၀ါးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂) ပတ်လောက်ကတည်းက အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သဘောတူညီမှု ရခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အာတီတာဟာ ဒီနွေရာသီမှာ အသင်းရဲ့ လူစာရင်းကို အင်အားတောင့်တင်းအောင် လုပ်ထားဆဲဖြစ်ပြီး အသင်းဆီကို ဂါဘရီရယ်လ်၊ ၀ီလီယံ နဲ့ ဆာလီဘာ တို့ကို ခေါ်ယူထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။